सानो आँखाको मेकअप यसरी गर्नुस
मानिसको आँखा सुन्दर र संवेदनशील अंग मध्येमा पर्छ । व्यक्तिअनुसार आँखा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । साना, चिम्सा, ठूला, मुन्द्री भएका, मुन्द्री नभएका र सुन्निएको खालका । आँखा आफैँमा सुन्दर हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बुझाइ वा रुचिअनुसार थोरै मेकअप गरेर फरक देखाउन सकिन्छ । आफूलाई मन परेको लुक्स दिन सकिन्छ । साना र चिम्सा आँखालाई थोरै ठूलो तथा सुन्निएको जस्तो देखिने आँखालाई सामान्य देखाउन सकिन्छ । अब जानौँ केही टिप्स
कसैको आँखा सानो मात्रै नभएर सुन्निएको वा पुक्क परेको हुन्छ । आँखालाई सामान्य देखाउन क्रेजभरी लाइट अथवा न्युड कलरको आइस्याडो लगाएर हल्का स्मोकी बनाउँदा सुन्दर देखिन्छ । साइड गाजल पनि लगाउन सकिन्छ । घरमै बसेर हामी आँखाको मेकअप गर्न सक्छौँ । यद्यपि, मेकअप गर्दा विशेष सतर्कता भने अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
आँखा सानो भए पनि मुन्द्री भएको छ भने लाइट अथवा न्युड कलरको आइस्याडो क्रेजमा लगाउनुपर्छ । त्यसपछि ठिक्क धेरै पातलो पनि होइन, धेरै मोटो पनि होइन को गाजल र मस्कारा लगाउँदा सुन्दर देखिन्छ ।
घरमै बसेर हामी आँखाको मेकअप गर्न सक्छौँ । यद्यपि, मेकअप गर्दा विशेष सर्तकता भने अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न उत्पादनको प्रयोगमा विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । सकेसम्म राम्रो ब्रान्डको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ । दैनिक मेकअप गर्दा आँखाको बनोटअनुसार गर्नुपर्छ । चिम्सा र साना आँखा चिम्सा र साना आँखा भए फुल कट क्रेज हल्का स्मोकी बनाउँदा आँखा सुन्दर र ठूलो देखिन्छ ।
सोमवार, श्रावण २७, २०७६, ०१:०८:००
रेबीज : कुकुर देखि सावधान, रेवीज बारे थाहा पाई राखौँ
दृष्टि बचाउन समयमा नै आँखाको उपचार गराउनु आवश्यक : डा. बन्दना क्याल बाल आँखारोग विशेषज्ञ
डा. सन्दुक रुइतलाई डेंगी